10% Off On Best Room Available Room Rates
10% Off On Best Room Available Room Rates အသေးစိတ်
ပိတ်ရက်တွေမှာ အိမ်မှာလည်း မနေချင်ဘူး…. သက်တောင့် သက်သာလည်း ဖြစ်ချင်တယ်…. တကယ့် ခရီးသွားနေတဲ့ ခံစားချက်မျိုးလည်း ရချင်တယ်ဆိုရင် ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ ?
Facilities အပြည့် နဲ့ ဟိုတယ်ကောင်းကောင်းတစ်ခုမှာ သွားရောက်ပြီးတော့ ဇိမ်ကျကျ နဲ့ အပန်းဖြေလိုက်မယ်ဆိုရင်ရော
ဒီလိုမျိုး အတွေးတစ်ထပ်တည်း ကျနေတဲ့ Traveler တွေအတွက် Swimming Pool, Gym, Spa အစရှိတဲ့ အမိုက်စား Facilities တွေ နဲ့ ရန်ကုန်မြို့က အကြီးဆုံး Hotel တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ Grand Mercure Yangon Golden Empire မှာ B&F Clubcard နဲ့ ဆိုရင် Room Rates အတွက် 10% Off ပရိုမိုးရှင်း ရှိနေပါပြီ….
Grand Mercure Golden Empire Hotel မှာ မည်သည့် အခန်းဈေးနူန်းကိုမဆို 10% Off ပရိုမိုးရှင်းကို ရယူဖို့ အတွက်ဆိုရင်တော့ Hotel Booking တင်တဲ့အခါ B&F Clubcard ကိုပြသပြီးတော့ အခန်းဈေးနူန်းအတွက် 10% Off ရယူနိုင်ပါတယ်….
ပရိုမိုးရှင်း အကြောင်းအရာ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်သိရှိလိုတယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် 09 895711240 , 09 895711236 ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်...
Promotions Periods - 18.March.2020 To 18.Sep.2020
Discounts are not valid in conjunction with other promotions, discounts or special events.
Card should be presented upon makingareservation or prior to settlement of the bill.
Cardholder must present the card together withavaild ID, if needed.
ClubCard must be present in settling the bill. Otherwise the discount will not be given.